कुनै बेला नेपाली चलचित्रकी सफल अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर केही वर्ष डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीमा आबद्ध भइन् । उनी पार्टीमा असन्तुष्ट हुँदै बाहिरिइन् ।
तर अब कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध नहुने गरी राजनीतिबाटै बाहिरिने निर्णयमा करिश्मा पुगेकी छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी छाडेपछि उनी कुनै पनि राजनीतिक दलमा जोडिएकी छैनन् ।
पछिल्लो समय राजतन्त्रको पक्ष लिएर अभिव्यक्ति दिएपछि करिश्मा फेरि चर्चामा आएकी छन् । अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरसँग लोकान्तरकर्मी रामजी ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश –
पछिल्लो समय तपाईंले नेपालका राजनीति पार्टीलाई खराब भन्दै मुख खोल्नुभएको छ, यसको तात्पर्य के हो ?
– तपाईंलाई के लाग्छ ? सही छन् भने त्यो जनताले अनुभव गर्न पाउनुपर्छ । संसारभर राजनीतिविना देशको विकास हुँदैन तर नेपालको राजनीतिले देश कता गइरहेको छ ? त्यो तपाईंलाई पनि थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ । राजनीति आफैंमा नराम्रो कुरा होइन तर समग्र नेपालको राजनीतिक संस्कार असाध्यै घिनलाग्दो भयो । सोही कारण राजनीति गर्न आउने व्यक्तिमा मैले विश्वास गर्न छाडेकी हुँ ।
तपाईं पनि कुनै बेला राजनीतिबाट देशको मुहार फेर्छु भन्दै लाग्नुभयो, तुरुन्तै छाड्नुभयो किन ?
– त्यसबेला मैले डा. भट्टराईलाई र उनीहरूको भिजनलाई मन पराएर राजनीतिक जीवन अँगालेकी थिएँ तर बिस्तारै उनीहरूबाट पनि यो देशको समृद्ध होला जस्तो लागेन । त्यसपछि पार्टी छाडेकी हुँ ।
त्यसबेला पद बाँडफाँडमा असन्तुष्ट भएपछि पार्टी छाडेको चर्चा थियो नि !
– पद बाँडफाँडमा समस्या भएको भन्दै मिडियामा समाचार आएको थियो तर न मैले त्यो कुरा कुनै मिडियामा भनेकी थिएँ, न कुनै व्यक्तिले भनेको छ । सामान्य गसिपका भरमा यस्तो खालको आरोप लगाउनु जायज हुँदैन । खासमा मैले आफ्ना विभिन्न विषयमा बोल्थें । पार्टीलाई प्रभावकारी ढगंबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको थिएँ तर पार्टीले कुरा नसुन्ने, पुरानै शैलीबाट अघि बढेपछि के गर्नु ?
नयाँशक्ति छाडेपछि नेकपामा जाने चर्चा पनि थियो, किन जानुभएन ?
– नेकपामा भित्र्याउनका लागि प्रयास भएको थियो तर करिश्मा मानन्धरलाई कुनै सामान्य स्थानमा थन्काएर गुमनाम बनाइदिन्छन् कि भन्ने चिन्ता लाग्यो । वास्तवमा मैले जब नयाँ शक्ति छोडें, त्यसपछि कुनै पनि राजनीति दललाई विश्वास गर्न छोडेकी हुँ । आफैं भन्नुस्, पार्टी घोषणा कार्यक्रममा त्रिपुरेश्वर रंगशालामा कस्तो खालको माहोल थियो । जनताले कति ठूलो आशा राखेका थिए । त्यसबेलासम्म डा. भट्टराईको ‘क्रेज’ कस्तो थियो । तर जनताको विश्वासको मतलाई कुल्चिएर बाटो बिराएपछि आफ्नो निर्णय त लिनुपर्‍यो ।
अब कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध नहुने गरी निर्णय लिनुभएको हो ?
– हो । अब म कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुँदैन । यही हो नेपालीले पाएको गणतन्त्र ? यही हो राजनीतिक संस्कार ? देशको विकास कसरी भइरहेको छ ? संसद् विघटनको लडाइँ देख्नुभयो । एउटा कुर्चीका लागि फेरि देशमा चुनाव हुँदैछ । ५ वर्षको स्थायी सरकारका लागि जनताले नेकपालाई भोट दिएका थिए तर आफ्नै पार्टीको झगडाका कारण करोडौं खर्च गराएर फेरि चुनाव गराउने प्रयास भइरहेको छ । सधै जनतालाई दुःख दिने ? यस्तो राजनीतिमा लागेर कुनै फाइदा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नेपालमा पार्टी ‘सिस्टम’ काम छैन । २ विचारको काम छ, राजा चाहिन्छ र २ विचारले नेपाल चलाउने । नेपालमा २ पार्टी ‘सिस्टम’ चाहिएको मैले अनुभव गरेकी छु । देशमा धेरै पार्टी भए । यतिधेरै पार्टीको कुनै काम छैन । अब देशमा ‘डेमोक्र्याटिक’ र ‘कम्युनिज्म’ भएका २ पार्टीसहित राजाको आवश्यकता छ ।
तपाईं पटक–पटक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेटघाट गरिराख्नुभएको भन्ने चर्चा छ । सबै पार्टी छोडेपछि राजतन्त्रमा लागेको त होइन ?
– पूर्व राजा र उनको परिवारसँग मेरो अहिलेको सम्बन्ध होइन । पुरानै सम्बन्धका कारण पनि भेटघाट हुन्छ, भेटघाटको अर्थ यो होइन कि राजतन्त्रको पक्षमा लाग्नुपर्छ । पूर्व राजा र उनको परिवारसँग मेरो आफ्नै किसिमको सम्बन्ध भएकाले भेटघाट हुनु सामान्य हो । अर्को कुरा नेपालमा राजनीति गर्नेले राजनीति र जनताले खबरदारीको भूमिकामा काम गर्नुपर्ने हो तर समग्र जनता विभिन्न माध्यमबाट राजनीतिमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।
नेकपा, कांग्रेस र अरु पार्टीका कार्यकर्ता र समग्र कर्मचारी संयन्त्रमा राजनीति घुसिसकेको छ । त्यसले गर्दा तुरुन्तै देशमा राजा आउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन तर जनताले चाहेमा त्यो भन्न सकिन्न । राजाको पालामा स्थापित नेपालका उद्योग, कलकारखाना सबै बन्द भइसके । यी उद्योग त्यसपछि किन बन्द भए ? बन्द उद्योग किन खुला गरिएन ? राजतन्त्र हटाएपछि देशको हालत कस्तो भयो देख्नुभएको छ सबैले । राजतन्त्र हटेपछि विदेश पलायन बढेको सबैले बुझ्नुभएको छ । देशको आधा संख्या विदेश पलायन भइसक्दा पनि नेपाली नेताहरूलाई मन चसक्क हुँदैन ?
तपाईंलाई किन राजनीतिबाट वाक्क लागेको हो ?
– खासमा नेपालमा सधै कुर्सीका लागि झगडा भएको देखेकी छु । कुनै पनि पार्टीले जनताको हितमा काम गर्ने गरी ‘स्मुथली’ काम गरेको देखिनँ । राजनीतिमा लागेका नेताहरूले पदका लागि नागरिकलाई सडकमा उतारेका छन् । जनयुद्ध किन भयो ? त्यसको उपलब्धिलाई संस्थागत गरेको खै ? १७ हजारले बलिदान दिएको बिर्सिनु हुँदैन । कुनै पनि दलका नेताले पदमा पुगेपछि नागरिकका समस्यामा कुनै ध्यान दिएको पाएकी छैन । आशा राखिएका राजनीति गर्न सक्ने व्यक्तिले समेत सधै अर्को पार्टीको विरोधमा सीमित रहेको पाएँ । मान्नुस्, स्वयं आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता पनि नेपालका कुनै पनि दलसँग सन्तुष्ट छैनन् ।
– अब कुनै पनि राजनीति पार्टीमा आबद्ध हुने छैन । लामो समयदेखि चलचित्र उद्योगमा सक्रिय रहें । करिश्मा मानन्धरको आफ्नै किसिमको ब्राण्ड छ । राजनीतिमा लागेपछि जे बोले पनि हुने, जसो गरे पनि हुने संस्कार छ । यो संस्कारबाट बाहिरिएर अब म विशुद्ध समाज सेवामा लाग्ने निर्णय गरेकी छु । खासमा मैले आजैदेखि ‘यात्रा’ नामक विशेष ‘भ्लग’ कार्यक्रम शुरू गरेकी छु । यो आफ्नै च्यानलबाट रिलिज हुनेछ ।
हरेक महिना एउटा ठाउँको यात्रामा निस्कने र हरेक यात्रामा भेटिएका दुःखी, गरीब, असहायलाई ५० हजारसम्मको सहयोग गर्ने निर्णय गरेकी छु । यो सहयोग मेरो व्यक्तिगत रकम हुनेछ । पहिलो यात्रा मैले सिन्धुपाल्चोकबाट शुरू गरें । त्यहाँस्थित तिनघरे संस्कृत विद्यालयमा केही सहयोग गरें । मेरो सहयोगमा कुनै एनजीओ, पार्टीको लगानी हुने छैन । अब छिट्टै खप्तड यात्रामा निस्कने योजना गराएकी छु । मानौं कुनै पार्टीमा आबद्ध हुन्छु भने कुनै आयोगमा राख्ने र यत्तिकै थन्काइदिन सक्ने सम्भावना पनि छ ।